လမ်းပြကြယ်: အော်သံမကြားရပေမယ့် တူညီတဲ့ဆန္ဒတွေက ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်
အော်သံမကြားရပေမယ့် တူညီတဲ့ဆန္ဒတွေက ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်
လူမသေခင် ကထဲ့က နာမည်တွေသေနေတာ...မသိကြသေးဘူးလား...
ကျောင်းသားထု တရပ်လုံးက တညီတညွတ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို မင်းကိုနိုင်နှင့်ခွပ်ဒေါင်းအာဇာနည် ညီနောင်အားလုံးကို ချွင်းခြွက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ...
‎"" နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP "" ၏ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေ၊ပြည်ထဲရေမှာရှိတဲ့စာရင်းတွေနဲ့ NLD ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေကို ညှိနှိုင်းလို့မရသေးတာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။. အထက်ပါ ပြောဆိုချက် သည် ကျိုးကြောင်း ခိုင်လုံမှုမရှိပါ ဟု
ယူဆပါသည်...အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်...စာရင်း ရှိခြင်း မရှိခြင်း၊ မှန်ခြင်းမမှန်ခြင်း အငြင်းပွားစရာ အချိန်မဟုတ်ပါ လောလောဆယ် သိသာထင်ရှား ရှိနေကြတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ၈၈ ခေါင်းဆောင်များ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ အရှင် ဂန္ဘီရ စသည့်သူများကို နားရီမဆိုင်းချက်ခြင်းလွှတ်ပြလိုက်ပါ..ကျန်သူများကို ဆက်လက်စီစစ်ပြီး ဆက်တိုက် လွှတ်ပေးလို့ရပါတယ် ရိုးသားကြမယ် ဆိုရင်ပေါ့...
Down with the wicked government in Burma!
A bas le gouvernement méchants en Birmanie!
FREE ALL BURMA POLITICAL PRISONERS
Jan 4th, ဒီနေ့ ည ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီ အထိ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အခြေအနေနဲ့အထူးသဖြင့် အကျဉ်းသားများရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်...မြန်မာ့ အရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အမေရိကန် မိတ်ဆွေ ၅၀ ခန့် တက်ရောက်နားထောင်ပြီး သူတို့ ကို အကျဉ်းသားတွေ ရဲ့ နံမည် သူတို့ လက်ရေးနဲ့ရေးခိုင်းပြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ တချို့ဒီဂရုက ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ၊ မိတ်ဆွေ ရဲဘော်များကို ရှယ်လိုက်ပါတယ်...နိုင်သမျှ လက်တွေ့ လုပ်နေပါ့ မယ်။
(ကိုမင်းနိုင်- အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း - ဘတ်ဖဲလိုးမြို့)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမလွတ်ပေးပဲနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ဆိုတာ လေထဲမှာပဲရှိနေဦးမှာပါ...
ဖမ်းတုန်းကဘယ်စာရင်းနဲ့မှဖမ်းထားတာမဟုတ်ရင် လွှတ်ရင်လဲစာရင်းမလိုဘူး။နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချည်းပဲလွှတ်လို့မတရားဘူးထင်နေရင်လဲ ထောင်ခါလိုက်ကြပါတော့လား။
ကမ္ဘာမြေတုန်ဟီးသွားအောင်တောင်းဆိုကြပါစို့။ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။အခုချက်ချင်းလွှတ်ပါ။
မင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး..ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ~~~~
‎'' Ko Min Ko Naing '' နှင့် တကွ ၈၈ မျိုးဆက်များအား ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့မှု့များအား တုန့်ဆိုင်းနှေးကွေးနေလျှင် မကျေနပ်မှု့များမှ
တဆင့် လူထု အုံကြွ မှု့ သို့ အသွင်ကူးပြောင်းတော့မည် ဖြစ် ကြောင်း....
ထို့ကြောင့် ချွင်းချက် မရှိ ချက်ချင်း လွှတ်ပေးပါရန် လေးနက်စွာ တောင်းဆိုပါသည် ။ ။
‎90 တုန်းက ဝန်းရံပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ထောင်ထဲ ရောက်တော့ မေ့နေကျတယ်..။ ခုလည်း အကျယ်ချုပ်က လွတ်ဖို့ ပါတီဝင်တွေ ထက်ကို တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားပေးခဲ့တယ်..။ ခု.. သူတို့ ချင်းဆုံကြပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် (ကျောင်းသားများအတွက်)ကျ ...သူတို့ မအားလပ်တော့ဘူးလေ..။ နောင်ဆိုရင်တော့ -ီးပဲ လို့ ဆဲရမလား တွေးနေမိတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင် ရေ... ကျွန်တ်ာတို့က လှေကားတွေ ဆိုရင်တောင် ရေဆေးချရမယ့် သင်ခန်းစာတွေပါပဲ ဗျို့..။ ကျွန်တော်ကျောတော့ ခွေးချေးနင်းထားတဲ့ ခြေရာတွေ ပွနေပါရော့လား ဗျာ...။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက် လာနိုင်မည့် အခြေအနေကောင်းများ မြန်မာပြည် မှာ ဖြစ်ပေါ်လာပါစေ။
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဗကသကျောင်းသားတွေအားလုံး..အားလုံး....နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကို အခုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါ...
The whole Burmese nation is grieving for the unfair and unjust punishments for Ko Min Ko Naing, students and national leaders.
Free Ko Min Ko Naing, Ko Mya Aye, Ma Nilar Thein, U Khun Tun Oo and all political prisoners.
ကျုပ်တို့၏ " ခွပ် " ဒေါင်းတွေကို " က " ဒေါင်းဖြစ်ဘို့အချိန်တန်နေပြီ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် ကိုလျှောက်လှမ်းနေပါပြီလို့ ပြောနေသောအစိုးရသစ်မှလူကြီးများ ကျုပ်တို့ရဲ့ ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
ငါတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေက အက်ကြောင်းတွေ ထပ်ကုန်ပြီ...။ ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေ အော်နေဆဲ...အော်နေမြဲ...အော်ရဦးမယ်..၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စေတနာမှာ မုသားတွေ ကင်းရှင်းပြီး ရိုးသားတယ်ဆိုရင်.... ဖွင့်လိုက်တော့... အကျဉ်းတံခါးတွေ... ။
Aye Aye Soe Win It is indeedanational cause. Free them all. ကို မင်းကိုနိုင်နှင့်ခွပ်ဒေါင်းအာဇာနည် ညီနောင်အားလုံးကို ချွင်းခြွက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ...We will never get tired of asking for their freedom. Free them all now, now, now.
Nan Htay Htay Khin
အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရင် အစိုးရကဖမ်းမယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ လုပ်နေတဲ့သူတွေလို့
မစာမနာပြောတတ်တဲ့သူတွေကို ကြည့်စေချင်ပါတယ် ...
ကျွန်မ က နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံကိုတော့
အူထဲ အသဲထဲက လှိုက်နေအောင် ချစ်တတ်ပါတယ် ..
ကျွန်မ နိုင်ငံရေးမလုပ်နိုင်လို့ လုပ်နိုင်နေတဲ့ သူတွေ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အမြဲလေးစား ဂုဏ်ယူမိနေတဲ့
သူတစ်ယောက်ပါ .. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့တောင်းဆု ပြုပါတယ်..
နှလုံးသားထဲက ဆန်ဒ ကို အွန်လိုင်းကနေ တာင်းဆုပြုလိုက်တာပါ ...
အာဏာရှင်တွေရဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်၊ အနိုင်ကျင့်၊ စော်ကားတာတွေ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေ၊ လိမ်ညာလှည့်ဖြားတာတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ အတူတူပါပဲ။ မြန်မာပြည်က အာဏာရှင်တွေ ဘယ်လိုပဲ အရောင်ပြောင်းပြောင်း ရုပ်ပြောင်းပြောင်း သူတို့တွေဟာ ကတ္တီပါလက်အိတ်စွပ်ထားတဲ့ သံလက်သီးတွေပါပဲ။ ဒီလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
သူတုို့ရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကြံ့ကြံ့ခံနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ အချိန်နဲ့အမျှ စက္ကန့်နဲ့အမျှ သေကြေပျက်စီးနေကြပါတယ်။ ကျဆုံးနေကြပါတယ်။ သူတို့တတွေ အခုချက်ခြင်းကို လွတ်မြောက်မှ ဖြစ်မယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူးလို့ပြောတာ စော်ကားတာပါ ဒါပေမယ့် နိုင်ကျဉ်းမရှိဘူးဆိုလဲ အများအတွက် တောင်းဆိုပေးလို့ မကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေနဲ့ ထောင်ချထားသူ အားလုံးကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Myat Thi Ha.....
Min KO Naing ko လွတ် ပေး သင့် တယ်
ယုံကြည့်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်..
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဗကသကျောင်းသားတွေအားလုံး..အားလုံး....နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကို အခုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါ..
Aung Zin Myint
ကိုမင်းကိုနိုင် မလွတ်သေးတာဘာကြောင့်လို့ထင်ကြပါလဲ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့် အထင်၊အမြင်သက်သက်ကတော့ နှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ဗျ။
ကမ္ဘာ.လူသားတစ်ရပ်လုံးလက်နက်ကိုင်ပြီးဒုက္ခပေးခဲ.တဲ.ဘိန်းဘုရင်တွေနဲ.တောင် ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးအတူလက်တွဲနိုင်သေးရင်အပ်တိုတစ်ချောင်းမကိုင်ဘဲတိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိဖို.တောင်းဆိုခဲ.သူတွေကိုဘာလို.ဆက်ဖမ်းထားတာလဲ။ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချက်ခြင်းလွှတ်။
လွှတ်ပေးလိုက်ပါ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။
...ဘာတွေ ဇယားရှုပ်နေတာလဲ ..
အကြောင်းပြချက်တွေကို ပြောတာက ပြောတဲ့လူတွေတော့ မသိဘူးဗျာ..
ဗျာ.... စစ်အစိုးရဖမ်းထားတာ သူကစာရင်းမရှိဘူး ဟုတ်ရဲ့လားဗျ။ အံ့ရော အံ့ရောဗျာ....
အဲဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးဗျာ အကျဉ်းဦးစီးဌာန(အကစ) မှာရှိတဲ့ သီးသန့်အကျဉ်းသားစာရင်းရယ် အထူးအကျဉ်းသားစာရင်းရယ်ကို အရင်လွှတ်လိုက်ဗျာ။ အဲဒီလူတွေလွတ်လာရင် ကျန်တဲ့လူစာရင်း အလိုလိုရမယ်။ လူပြိန်းတောင် ပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်ပါဗျာ........
ဘယ်သူ့စာရင်းနဲ့မှ တိုက်နေ ကိုက်နေစရာ မလိုပါဘူးဗျာ။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချက်ချင်းလွှတ် ” ဆိုတဲ့ ပိုစတာကပ်လို့တဲ့။ ကိုဝေဖြိုး နဲ့ ကိုဇာနည်ထွန်း ၂ ယောက်ကို၊ ပဲခူးတိုင်း-ပြည်မြို့မှာ မဟုတ်တရုတ် ပုဒ်မများ(သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပုဒ်မတောင်ပါသေး)တပ်ပြီးတရားစွဲထားပါတယ်ဗျို့။ “ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွှတ်ပါ။”
ကိုမင်းကိုနိုင် သူဟာတချိန်မှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်..ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အ၇ည်အချင်းတွေလည်း၇ှိတယ်..ဒါကိုသိလို့ များ ထောင်ထဲထည့်ထား၇လေသလား စစ်ခွေးတို့ ၇ယ်..မင်းတို့ လုပ်ထားကြ အချိန်တန်၇င် ပွင့်မယ့်ကြာက ပွင့်မှာပဲ..ပြေးစ၇ာနေ၇ာတွေ ကြို၇ှာထားကြဟေ့.............................
ဂျာနယ်တွေဖတ်ရတာ ခုနောက်ပိုင်းမှပဲ ပီတိဝေဖြာရတော့တယ်ဗျာ...အမေ့ပုံတွေများဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ဖော်ပြထားလိုက်တာ စာမျက်နှာအပြည့်နဲ့ပေါ့ သမ္မတပုံများ ဘယ်ဂျောင်ရောက်နေပါလိမ့်လို့ တွေးမိတယ်တကယ်ပါပဲ...ဒါပေမယ့်ဗျာ တခုတော့ သတိထားမိလိုက်တယ် အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အကြောင်း ဘာကြောင့်ထူးထူးခြားခြားမဖော်ပြကြသေးတာလဲ မတောင်းဆိုကြသေးတာလဲဗျာ တောင်းဆိုကြပါ ဖော်ပြကြပါလို့ ကျွန်တော် ဒီဂရုကနေတဆင့်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်...ကျွန်တော်..ဂရုကတော့ ညီညီညာညာ..အသံပေးဟစ်လို့..ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းအားလုံး လွှတ်မြောက်ဖို့အရေး..ဒို့အရေး..ဒို့အရေး..အစဉ်တစိုက်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မတရားပုဒ်မ မတရားစီရင်ချက်များဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းချ ခံရသော ၈၈၈၈ ဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ. ၂၀၀၇ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းလိုက်သော ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ကျောင်းသားများ တိုင်းရင်းသားရင်းသားခေါင်းဆောင်များအားလုံး...ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပါ.
Myo Aung Myo Aung
ကိုသိန်းစိန် ..မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားထားပါတယ် .." ကာလောဟိ အနတ္တာ " တဲ..အချိန်ဟာတန်ဘိုးဖြတ်လို.မရပါဘူးးတဲ.. ဒီတော..စစ်မှန်တဲ.ဒီမိုကရေစီထူးတောင်တဲ.နေရာမှာ...အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ..ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်မပေးဘဲနဲ...စစ်မှန်တဲ.ဒီမိုကရေစီထူထောင်ဘို.ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး...သူတို.တစ်တွေ ကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထည်.တာဟာ...စစ်မှန်တဲ.ဒီမိုကရေစီထူထောင်တဲ.နေရာမှာာ...အချိန်တွေ အများကြီးဆုံးရှုံးပါတယ်....အချိန်တွေ " သဲထဲ ရေသွန်သလို " ဖြစ်နေပါတယ်...ဒါကြောင်.ကိုမင်းကိုနိုင်တို.တစ်တွေက စစ်မှန်တဲ.ဒီမိုကရေစီကို နားလည်ပါတယ်..
လွှတ်စရာရှိရင် လွှတ်ကြပါ ဘယ်တော့လဲ မမေးနဲ့ အခုလွှတ်ကြ ငါတို့ နောင်တော်ကြီး ၈၈၈၈အုပ်စုဟာ သမိုင်းမှာ တရားခံ မဟုတ်ဘူး ။ သွေးနဲ့ ပြောမှ သိမှာလား ဦးသိန်းစိန်..သွေးကြွေးတွေကြေမှ လွှတ်မယ်ဆိုရင် နောင်သံသရာ စနစ်ပြောင်းရင် မင်းတို့ အလောင်းတွေ တောင်လိုပုံနေစေရမယ်..ဟုတ်လား..ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး အမြန်ဆုံး လွှတ် ရေး ....ဒို့ အရေး .ဒို့ အရေး...လွှတ်စရာရှိတာ တွေ မြန်မြန်လွှတ်ကြ ရာဇ၀င်တွင်မဲ့ ကိုကိုကြီးကို အခုလွှတ်ကြဒီငြိမ်းလင်းတို့သားအဖပါ မြန်မြန်လွှတ်ကြ ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွှတ် မိုးကောင်းတုံးရွာထားကြ ပေဖြစ်တုံး ခံမယ် ကွ တူဖြစ်ရင် အသေနှံ ပြီသာမှတ်လိုက်ကွာ..ယုံထား
FREE KO MIN KO NAING AND ALL BURMESE POLITICAL PRISONERS!!!
ဦးမင်းကိုနိုင် နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးလွတ်မြောက်ပါစေ...( 1/7/2012 )
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တစ်ကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ(ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရသူများ)အား တစ်ယောက်မကျန် ယခုချက်ချင်းအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ ...
တောင်းပန်လို့မလွှတ်ရင်တော့..ကျောင်းနံရံတ၀ိုက် ကို..ဒေါင်းအလံတွေ ပြန်စိုက်ပြီး..ဗြောင်းဆန်အောင်တိုက်ပွဲဆင်ဘို့သာ ပြင်ကြပေတော့..ညီနောင်
သန်းရွေသေရင် မြန်မာပြည် တ၀က်ဒီမိုကရေစီရမယ် ဒီလူယုတ်မာကိုသေအောင်သာလုပ်ကြ ဒါမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လာမှာ သန်းရွေအကြောက်ဆုံးက အန်တီစုနဲ့ ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပေါင်းမိမှာအကြောက်ဆုံးဘဲ
အပြစ်မရှိဘဲ မတရားအကျဉ်းကျခံနေကြရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါရန် လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုပါသည်။
အစ်ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တစ်ကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး တစ်ယောက်မကျန်လွှတ်ပေးပါ ..။
အပိုတွေလုပ်ပြီး အမေရိကန်ကိုခေါ်တယ်။ ဂျပန်ကိုခေါ်တယ်။ ထိုင်းကိုခေါ်တယ်။ ခေါ်လို့ရသမျှလျှောက်ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ လိမ်လို့ရသ၍ လိမ်နေတယ်။ ငါတို့တွေကလည်း အော်လို့ရသရွေ့အော်နေဦးမယ်......ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ချက်ချင်းလွှတ် ( 07>01>2012 11:59PM Japan Standard Time)
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စာရင်းကွာတာ မကွာတာ နောက်ထား ၊ နာမည် သိပြီးသား ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ရှစ်ရှစ် မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားတွေ ကို အရင်လွှတ်ပေးပါ။
အရမ်း အတိအကျ လိုချင်ရင်လည်း ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ကို လွှတ်ပေးပြီးနောက် AAPP ကလာပီးစာရင်းသေချာလာကောက်ပေးပါမည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မလွှတ်တာဟာ ဗမာပြည်မှာ ပြောင်းလဲတဲ့ခြေလှမ်းတွေ
စနေပါပြီလို့ဘယ်သူကပဲ ပြောပြော ဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူး။ လွှတ်မယ်ပြောပြီး မလွှတ်တာဟာ
ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ အားလုံးက ယူဆနေကြပါပြီ။ ဒါဟာ ပြည်သူ့
နှစ်သစ်ကို အသစ်သော ကုသိုလ်များနဲ့ ဖြတ်သန်းကြပါ အစိုးရဆိုသူများခင်ဗျား။ မလွတ်မြောက်သေးသော လွှတ်ကိုလွှတ်သင့်သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ချွင်းချက်မထား လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူကြပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ -၀---
Free Min Ko Naing and all political Prisoners..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Free them Now.!!!!!!
ကျောင်းသားထု တရပ်လုံးက တညီတညွတ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို မင်းကိုနိုင်နှင့်ခွပ်ဒေါင်းအာဇာနည် ညီနောင်အားလုံးကို ချွင်းခြွက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ
သိစေချင်ပါသည်- အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေကောင်စီကို.....ဘယ်ဟာအဓိကကျသလဲ
ဆိုတာ- နိူင်ငံပြုပြောင်းလဲရေးမှာ အဓိကကျတာအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်...အဲဒါဘာလဲဆိုတော့
ကိုမင်းကိုနိူင်နဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ပါပဲ...မြန်မာနိူင်ငံကိုလာတဲ့ နိူင်ငံတ
ကာ သံတမာန်တွေလည်း နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးကိုပဲ အဓိကဇောင်းထားပြီး
တောင်းဆိုသွားကြပါတယ်.....ဒါကြောင့်- ကိုမင်းကိုနိူင်နဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွတ်ချက်
မရှိ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ လွှတ်ပေးပါ..။
LuffLivid DeathDefeat...If you want to understand democracy, spend less time in the library with Plato, and more time in the buses with people.
FREE OUR STUDENT LEADER MIN KO NAING AND ALL POLITICAL PRISONERS!!!!
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့စကားကို ကိုနေဘုန်းလတ်က အားဆေးသဖွယ် မှီဝဲတဲ့အကြောင်းကို သူ့မိခင် ဒေါ်အေးအေးသန်းက ဗွီအိုအေမှာ ပြောထားတာလေးပါ။
“ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောပြတဲ့စကားလုံးလေးကတော့- ရောက်တဲ့နေရာက အရေးမကြီးဘူး-တဲ့၊ ကျင့်နေတဲ့တရားက အရေးကြီးတယ်-တဲ့။ ဖိအားဒဏ်ကို ကြာရှည်ခံနိုင်မှ ကာဗွန်တွေသက်တမ်းရင့်၊ စိန်ပွင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ အဲဒီအမှာစကားလေးကြောင့် သူတို့လည်း အားတင်းလို့ ရတယ်-တဲ့”
သားဖြစ်သူ နေဘုန်းလတ်က မိခင်ကို ပြန်ပြောတာလေးကို ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ — with Moon Orchid.
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ နဲ့ဗကသကျောင်းသားတွေအားလုံး အခုချက်ချင်းလွတ်ပေးပါ...
(7th.JAN.2012) face book ပေါ်ရှိ Free Min Ko Naing Now Groupမှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။